बेवारिस शवले हिमालमा आरोही त्रसित ! – Sancharak
Home > पत्रपत्रिकाबाट > बेवारिस शवले हिमालमा आरोही त्रसित !
बेवारिस शवले हिमालमा आरोही त्रसित !
पार्वती साउद १ चैत्र २०७४, बिहीबार ०७:३० March 15, 2018 पत्रपत्रिकाबाट
चैत १ ।
दशकौंदेखि हिमालमा रहेको बेवारिस शवलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आरोही त्रसित बन्ने गरेका छन्। आरोही र गाइड कीर्तिमान कायम गर्न हिमाल आरोहणमा जाँदा बाटैभरि शव कुल्चिनुपर्ने बाध्यता छ। यो खबर आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।
आठ हजारमाथिका अधिकांश हिमालमा बाटैभरि प्रशस्त शव भेटिन्छन्। चुचुरो चुम्ने लक्ष्यमा हिँडेका आरोही शव देख्दा झस्किँदै खिन्न मन पारेर अघि बढ्न बाध्य रहेको पर्वतारोहण प्रशिक्षक संघका अध्यक्ष तथा आरोही गाइड लाक्पा नुर्बु शेर्पाले बताए। ‘आफ्नै साथीको शव भेटिन्छ, कतिपय चिनजानकै विदेशीको शव देखिँदा मन झस्किन्छ। यसको व्यवस्थापन राज्यले तत्काल गर्नुपर्छ’, उनले भने।
आरोही लाक्पा शेर्पाले धौलागिरि हिमाल ९८१६७ मि० चुम्नै लाग्दा विदेशी नागरिकको शव देखेपछि हातखुट्टा नै कमजोर बनेको बताए। त्यो विदेशी शव करिब २० वर्ष पुरानो हुन सक्ने उनले अनुमान लगाए। तर चिसोले जस्ताको तस्तै छ। करिब २५ वर्षदेखिका शव हिमालका क्याम्प र बाटामा अलपत्र अवस्थामा भेटिने गरेका छन्।
चार दिनअगावै भित्रियो मनसुन
पुरुषकै कारण यौनकर्मी बन्दा सजाय किन महिलालाई मात्रै ?
आजका पत्रपत्रिकाका सम्पादकीय :’प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका अपेक्षा’